သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခမဲ့ NPACKD DOWNLOAD, - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
ICO မပို 256 pixels ကိုအားဖြင့် 256 ထက်တစ်ဦးရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်၏။ ပုံမှန်အားဖြင့် icon တွေကို icon တွေကိုဖန်တီးအသုံးပြုကြသည်။
ICO မှ JPG အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
ယင်းနောက် task ကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသောအစီအစဉ်များကိုစဉ်းစားပါ။
Method ကို 1: Adobe က Photoshop ကို
Adobe က Photoshop ကိုကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ extension ကိုထောကျပံ့ပေးမထားဘူး။ သို့သော်ဤပုံစံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့ ICOFormat plugin ကိုလည်းမရှိ။
တရားဝင် site မှ ICOFormat plugin ကို Download လုပ်ပါ
ICOFormat loading ပြီးနောက် program ကို directory ကိုကူးယူထားရပါမည်။ စနစ် 64-bit နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ကလိပ်စာမှာတည်ရှိပြီး:
ကို C: Program Files Adobe က Adobe က Photoshop ကို CC ကို 2017 Plug-ins file format
အခါ Windows 32-bit ကိုအောက်ပါအတိုင်းဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, အပြည့်အဝလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်:
ကို C: Program Files (x86) Adobe က Adobe က Photoshop ကို CC ကို 2017 Plug-ins file format
သတ်မှတ်ထားသောဖိုင်တွဲတည်နေရာပါလျှင် « file format » ဒါကြောင့်ကိုဖန်တီးရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ခလုတ်ကိုနှိပ် "ဟု New Folder ကို" Windows Explorer ကို၏ Menu ထဲမှာ။
directory ကို၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ « file format ».
Photoshop မှာမူရင်း JPG image ကိုဖွင့်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရုပ်ပုံ resolution ကို 256x256 pixels ကိုထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်မပြုရပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် plugin ကိုရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
ထိုး "Save As ကို" main menu ကိုပါ။
ကျနော်တို့ format ရဲ့ရွေးချယ်မှုထပ်လောင်းအတည်ပြုသည်။
Method ကို 2: XnView
XnView - ထိုစဉ်းစား format နဲ့အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သူအနည်းဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာများ၏တဦးတည်း။
ပထမဦးစွာ JPG ဖွင့်လှစ်။
ထိုအခါရှေးခယျြ "Save As ကို" တွင် "File".
မူပိုင်ခွင့်အချက်အလက်ပေါ် click လုပ်၏အရှုံးအကြောင်းကြေညာချက်ထဲမှာ "အိုကေ".
Method ကို 3: Paint.NET
Paint.NET - အခမဲ့, open source ဆော့ဖ်ဝဲ။
အလားတူပဲ Photoshop ကို, လျှောက်လွှာပြင်ပပုံစံ ICO plug ကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။
တရားဝင်ထောက်ခံမှုဖိုရမ်ကနေ plugin ကို Download လုပ်ပါ
လိပ်စာတွေထဲကအညီမိတ္တူ plug ကို:
ကို C: Program Files paint.net ဖိုင်အမျိုးအစား
ကို C: Program Files (x86) paint.net ဖိုင်အမျိုးအစား
အသီးသီး, 64 သို့မဟုတ် 32-bit နဲ့ operating system အတွက်။
ဒါကြောင့် program ကို interface ကိုကြည့်ရှုသည်။
main menu ကိုယခုကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Save As ကို".
Method ကို 4: GIMP
GIMP - ICO များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူလာမည့်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ။
ပြောင်းလဲခြင်းကို select လုပ်ပါလိုင်းစတင်ရန် "ပို့ကုန်အဖြစ်" မီနူး "File".
နောက်ထပ်လိုင်းတစ်လျှောက်ရှိပုံ၏နာမတော်ကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်ခြင်း "အိုင်ကွန်ကို Microsoft Windows (* .ico) » သင့်လျော်သောနယ်ပယ်များတွင်။ စာနယ်ဇင်းများ "ပို့ကုန်".
နောက်တစ်နေ့မျက်နှာပြင် ICO ၏ parameters တွေကိုရွေးဖို့ကိုအသုံးပြုသည်။ ကို default လိုင်းချန်ထားပါ။ ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပို့ကုန်".
မူရင်းနှင့်ပြောင်းလဲဖိုင်တွေနဲ့အတူကို Windows directory ကို။
ရလဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော် GIMP နှင့် XnView built-in ပါပွီ ICO format ကိုသူတို့အားစစ်တမ်းကောက်ယူသာအစီအစဉ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကို Adobe Photoshop ကို, Paint.NET အဖြစ် Applications ကို ICO မှ JPG ပြောင်းလဲဘို့ပြင်ပ plug-in ကို၏ installation လိုအပ်သည်။
ဗီဒီယို Watch: ReactOS r74273 and Npackd installation manager (အောက်တိုဘာလ 2019).